म दुईवटा श्रीमान राख्न चाहान्छु, दुई श्रीमान् को बीच मा सुत्न मन छ, के मान्छ त यो समाजले ? – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/म दुईवटा श्रीमान राख्न चाहान्छु, दुई श्रीमान् को बीच मा सुत्न मन छ, के मान्छ त यो समाजले ?
सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश साभार गरेका छौ , महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ?
अहिले जे जे भएको छ त्यो सबै महिलाले सहिदिने भएर हो । उसले तीनवटा ल्याउँदा, १०औं जनासँग से’क्सुअल रिलेशनमा रहंदा, चुरोटले डाम्दा पनि सहिदिए मात्र परीवार जमेको देख्ने, त्यसलाई नसहे परीवार विखण्डन भएको देख्ने ।
त्यो घर, घर नहुने अनि महिलाले बरु एक्लै बस्छु भन्दा परिवार भड्किएको भन्ने ? अब महिला हरुले पनि आफ्नो शक्ति थाहा पाए । अब त्यसैगरी सहंदैनन् । जो आर्थिक रुपमा सक्षम छन् दवावमा रहन्नन् । त्यसो हुनु समाज विग्रिएको होइन । बिग्रिएको समाजको रुप देखिएको मात्र हो । हिंसामा पुरुष छन् भने पनि त्यहि हो ।
ल न, म दुईटा श्रीमान राख्छु भन्छु । मान्छ त समाज ? तर हामी त्यसो गर्दैनांै । गर पनि भन्दैनौं । महिला र पुरुषमा फरक सामाजिक सोचाई हुनु भएन भनेको मात्रै । यसो सोचौं न, दुईजना एक हुने भनेको दुईटाको खुशी जोड्दा झन् खुशी हुन सकिन्छ कि भनेर हो नि । स्वतन्त्रता मार्न त होइन । श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ तर बोलचाल छैन । दुईतिर फर्केर सुत्नुहुन्छ ।
अर्को एक्लै भएको मान्छे गीत लगाएर नाच्दै बस्छ, खुशी हुन्छ । स्वतन्त्रताले हो नि खुशी ल्याउने । अचेल म सुन्छु – अहिले त धेरै परीवारमा महिला, पुरुष दुबै कामकाजी छन् ।
केटाले म आज डिनर बाहिरै गरेर आउँछु भन्यो भने, केटी पार्टनरले पनि हस् मेरो पनि पार्टी छ आउन ढिलो हुन्छु है भन्छे रे । अनि त्यो पुरुष पार्टनर ढक्क हुन्छ रे । उसले गरुन्जेल काम साथीले गर्दा नकाम भन्ने हुन्छ ? भन्नुस् त ।
‘आ*त्मह*त्याको दु*रुत्साहन भनिएको कुरा गलत साबित भएर अन्तमा रवि निर्दोष भएर छुट्नेछन्’ – पूर्व डीआईजी विजय भट्ट
Breaking…..फेरिपनी १८ दिन सम्म सम्पुर्ण बजार, पसल, यातायात बन्द रहने ! भर्खरै गरियो यस्तो निर्णय !
मोदीका अत्यन्त निकटस्थ भारतका यि चर्चित मन्त्री बोले सीमानाको विबादमा, भविष्यको परिणाम ख्याल गर्न नेपाललाई दिए चेतावनी